चेलीबेटी बेचबिखनमा संलग्न कांग्रेस नेता सुनबहादुरलाई उच्च अदालतको क्लीन चिट ! |
चेलीबेटी बेचबिखनमा संलग्न कांग्रेस नेता सुनबहादुरलाई उच्च अदालतको क्लीन चिट !
प्रकाशित मिति :2019-07-17 13:51:56
काठमाडौं । चेलिबेटी बेचविखनमा जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेका नेपाली कांग्रेसका नुवाकोटका नेता सुनबहादुर तामाङलाई उच्च अदालत पाटनले उल्टाईदिएको छ । दुप्चेश्वर गाउँपालिका–१ का वडा अध्यक्ष सुनबहादुर तामाङलाई सफाई दिदै थुनामुक्त गर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय रमेशबहादुर थापा र हरिप्रताप केसीको सयुक्त इजलासले असार ३० गते पुनरावेदनको जिकिर नपुग्ने भन्दै तामाङलाई सफाई दिएका हुन् । उनीविरुद्ध तीनजना पीडित महिलाले सिआइबीमा जाहेरी दिएपछि उनी २०७५ पुस ७ गते पक्राउ परेका थिए । पक्राउ पछि नै उनले मुम्बईमा चार वटा कोठी सञ्चालन गदै आएको तथ्य बाहिरिएको थियो । यस अगाडी उनलाई जिल्ला अदालत नुवाकोटले ३७ वर्ष छ महिना कैद सजाय र रु २ लाख ५० हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । जिल्ला न्यायाधीश लोकजङ्ग शाहको एकल इजलाशले २०७४ सालमा उक्त सजाय सुनाएको थियो ।
प्रहरीका अनुसार, तामाङले भारतमा चारवटा कोठी संचालन गर्दै आएको दावी गरेको थियो । भारतको नयाँदिल्लीस्थित जेबी रोडको गल्ली नम्बर ६४, पुनास्थित सोना गार्छे–१५, कोलकाता र मुम्बई गरी चार ठाउँमा कोठी सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनको जेबीरोडस्थित कोठीमा ३५ जना, सोना गार्छेमा २७, कोलकातामा १५ र मुम्बईस्थित कोठीमा आठजना युवती छन् ।
पीडितको बयान अनुसार सबै कोठी उनकी श्रीमती राधा तामाङले सञ्चालन गर्दै आएको पनि प्रहरीको दावी छ । उच्च अदालत पाटनको आदेशसँगै डिल्लीबजार कारागारमा रहेका तामाङ रिहा भईसकेका छन् ।